विन्डोज, म्याकोस र लिनक्स 🥇 Emulator.online ▷ for को लागि best उत्तम वेबक्याम प्रोग्रामहरू
विन्डोज, म्याकोस, र लिनक्सको लागि best उत्तम वेबक्याम प्रोग्रामहरू
तपाईं मार्केटमा वेब क्यामेरा कार्यक्रमहरूका केहि कोटीहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। केहि अनुप्रयोगहरू पीसी क्यामेराको परीक्षणको लागि प्रयोग गरिन्छ र हेर्नुहोस् यसले यसले के प्रतिबद्ध गर्दछ भनेर बुझाउँदछ। अन्यसँग अधिक मजा प्रस्ताव र क्याप्चर छविमा फिल्टरहरू समावेश छन्। त्यहाँ विकल्पहरू पनि छन् जुन तपाईंलाई पछि सबै समीक्षाको लागि प्रदर्शन गरिएको सबै कुरा रेकर्ड गर्न अनुमति दिन्छ।
विन्डोज, म्याकोस, र लिनक्सका लागि तल best उत्तम वेबक्याम प्रोग्रामहरू छन्। चेक आउट गर्नुहोस्!
ManyCam भिडियो कन्फरेन्सिंग वा भिडियो पाठ रेकर्डिंग को लागी उपयोगी फंक्शन को एक संख्या प्रदान गर्दछ। अनुप्रयोगले तपाईंलाई स्क्रिनमा लेख्न र चित्रण गर्न, भिडियोमा छविहरू थप्ने, आकारहरू समावेश गर्ने, अन्यमा अनुमति दिन्छ। फाईलहरू, प्रदर्शन कम्प्युटर स्क्रिन, वा सेल फोन क्यामेराको साथ वेबक्याम छवि ओभरले गर्न पनि सम्भव छ।
प्रयोगकर्ताले अझै र color समायोजन गर्न, जुम गर्न, अस्पष्टता परिवर्तन गर्न सक्दछ, र साथै रमाईलो फिल्टरहरू र प्रभावहरू पनि प्रयोग गर्न सक्दछ। त्यहाँ यूट्यूब, ट्विच, र फेसबुक जस्ता विभिन्न प्लेटफार्महरूमा प्रत्यक्ष प्रसारणको विकल्प पनि छ। वा, यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ भने, नि: शुल्क संस्करणमा p२०p र सशुल्क संस्करणमा KK सम्म सामग्री बचत गर्नुहोस्।
भिडियो MP4, MKV, MOV, र FLV जस्तो लोकप्रिय ढाँचामा बचत गर्न सकिन्छ।
ManyCam (नि: शुल्क, अधिक सुविधाहरू र कुनै वाटरमार्क बिना भुक्तान योजनाहरूको विकल्पहरूको साथ): विन्डोज १०, and र | | म्याकोस १०.११ वा उच्च
YouCam एक कार्यक्रम हो कि काम र खेल को लागी उपकरण प्रदान गर्दछ। बिभिन्न भिडियो कलिंग सेवाहरू र लाइभ भिडियो प्लेटफर्महरूसँग उपयुक्त, योसँग वास्तविक-समय सुन्दरता फिल्टरहरू छन्। संवर्धित वास्तविकता प्रभाव को सयौं उल्लेख छैन।
प्रस्तुतिको लागि, प्रयोगकर्तासँग नोटहरू लिने, भिडियोहरू छविहरूको साथ सुपरइम्पोज गर्ने, स्क्रिन साझेदारी गर्ने, अन्यसँग स्रोतहरू छन्। यसको मैत्री ईन्टरफेसले तपाईंलाई मुख्य सुविधाहरू सजीलोसँग फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
यदि तपाईंले रेकर्ड गर्न छनौट गर्नुभयो भने, भिडियोलाई विभिन्न रिजोलुसनहरूमा बचत गर्न सकिन्छ, पूर्ण HD सहित, AVI, WMV, र MP4 ढाँचाहरूमा।
YouCam (भुक्तान गरिएको, -०-दिन नि: शुल्क परीक्षण): विन्डोज १०,,, र।
Web. वेबक्याम टेस्ट
वेबक्याम टेस्ट एक अनलाइन अनुप्रयोग हो जुन तपाईको पीसी क्यामेराले प्रस्तुत गर्ने प्रकार्यहरू एक साधारण तरीकाले परीक्षण गर्न अनुमति दिँदछ। केवल वेबसाइट प्रविष्ट गर्नुहोस् र बटन पहुँच गर्नुहोस् यहाँ क्लिक गर्नुहोस् वेबक्याम परिचयकर्ताहरूको पहुँच अनुमति गर्नका लागि। त्यसपछि जानुहोस् मेरो क्यामेरा प्रयास गर्नुहोस्। मूल्यांकनले केहि मिनेट लिन सक्दछ।
डेटा थाहा पाउन सम्भव छ जस्तै रिजोलुसन, बिट रेट, र colors्गहरूको संख्या, चमक, चमक, अन्यहरू। सामान्य परीक्षणको अतिरिक्त, प्रयोगकर्ताले अधिक विशिष्ट पक्षहरू जस्तै रिजोलुसन, फ्रेम रेट र माइक्रोफोनको मूल्या can्कन गर्न सक्दछ। त्यहाँ वेबसाइटमा आफ्नै भिडियो रेकर्ड गर्न र यसलाई WebM वा MKV को रूपमा बचत गर्न विकल्प पनि छ।
वेबक्याम परीक्षण (नि: शुल्क): वेब
Windows. विन्डोज क्यामेरा
विन्डोज आफैंले एक नेटिभ प्रणाली वेब कैमरा कार्यक्रम प्रदान गर्दछ। विन्डोज क्यामेरा एक सरल तर कार्यात्मक विकल्प हो, खास गरी उनीहरूलाई जो केवल आधारभूत कार्यहरू चाहिन्छ। सेटिंग्स मा पेशेवर मोड सक्रिय गरेर, तपाईं सेतो सन्तुलन र चमक समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ।
सँधै फ्रेममा रहन, अनुप्रयोगसँग केही ग्रिड मोडेलहरू छन्। त्यहाँ quality quality०p र फुल एचडी र फ्रिक्वेन्सी बीच भिडियो गुण परिवर्तन गर्न विकल्प पनि छ, तर सँधै 360० एफपीएसमा। परिणामहरू JPEG र MP30 मा बचत गरियो।
विन्डोज क्यामेरा (नि: शुल्क): विन्डोज १०
Web. वेबक्याम खेलौना
वेबक्याम टोय एक साधारण अनलाइन अनुप्रयोग हो जसको लागि वेबक्यामको साथ फोटो लिनको लागि रमाईलो फिल्टरहरू खोजिरहेका छन्। केवल वेबसाइटमा जानुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् तयार हुनुहुन्छ? हाँसो!। यदि ब्राउजरले पहुँच रोक्दछ भने, पीसी क्यामेरा प्रयोग गर्न अनुमति दिनुहोस्।
त्यसपछि बटनमा क्लिक गर्नुहोस् सामान्य सबै उपलब्ध प्रभाव लोड गर्न। त्यहाँ दर्जनौं विकल्पहरू छन्, कालिडोस्कोप, भूत शैली, धूम्रपान, पुरानो चलचित्र, कार्टुन, र अधिक सहित। तपाईलाई के मनपर्दछ चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि साइन अप गर्न क्यामेरा प्रतिमामा जानुहोस्।
नतीजा पीसीमा बचत गर्न सकिन्छ वा सजिलैसँग ट्विटर, गुगल फोटो वा टम्बलरमा साझेदारी गर्न सकिन्छ।
वेबक्याम खेलौना (नि: शुल्क): वेब
O. ओबीएस स्टुडियो
वेबकैम प्रोग्राम मात्र भन्दा धेरै, ओबीएस स्टुडियो सबै प्रमुख भिडियो स्ट्रिमि services सेवाहरूको साथ यसको कम्प्याटिबिलिटीका लागि परिचित छ। ती मध्ये, ट्विच, फेसबुक गेमि and र यूट्यूब।
तर पक्कै पनि यसले तपाईंलाई तपाईंको क्यामेरा छवि रेकर्ड गर्न र MKV, MP4, TS र FLV मा सामग्री बचत गर्न अनुमति दिन्छ। रिजोलुसन २240०p देखि १p०p सम्म हुन सक्छ।
अनुप्रयोगसँग धेरै सामग्री संपादन उपकरणहरू छन् जुन तपाईंको सामग्रीलाई पेशेवर देखाउनको लागि सक्षम छन्। ती मध्ये र color सुधार, हरियो पृष्ठभूमि, अडियो च्यानल मिक्सि,, आवाज घटाउने, र अधिकको लागि सुविधाहरू छन्।
ओबीएस अध्ययन (नि: शुल्क): विन्डोज १० र | | म्याकोस १०.१10 वा उच्च | लिनक्स
GoPlay शुरुआतीहरूको लागि राम्रो विकल्प हुन सक्छ, तर तिनीहरू मूलबाट टाढा हुन चाहन्छन्। कार्यक्रमले स्क्रिनमा लेख्नका लागि, साथै फोटोहरू सम्मिलित गर्नका लागि कार्यहरू प्रदान गर्दछ। भिडियोहरू K केएफ सम्म f०fps मा रेकर्ड गर्न सकिन्छ र पूर्वनिर्मित सम्पादकमा सम्पादन गर्न सकिन्छ।
अनुप्रयोगले तपाईंलाई तपाईंको पीसी स्क्रिन रेकर्ड गर्न र प्रत्यक्ष भिडियोहरू बनाउन पनि अनुमति दिन्छ। अनुप्रयोगको नि: शुल्क संस्करणले तपाईंलाई केवल २ मिनेटको भिडियोहरू रेकर्ड गर्न अनुमति दिन्छ, वाटरमार्कको साथ। परिणाम MOV, AVI, MP2, FLV, GIF वा अडियोमा बचत गर्न सकिन्छ।
खेल्न जानुहोस् (नि: शुल्क, पूर्ण सशुल्क संस्करणको साथ): विन्डोज १०, and र।
Ap. Apowersoft नि: शुल्क अनलाइन स्क्रीन रेकर्डर
Apowersoft नि: शुल्क अनलाइन स्क्रीन रेकर्डर उनहरूको लागि उपयुक्त छ जो पीसी स्क्रिन रेकर्ड गर्न आवश्यक पर्दछ वेब कैमरा छवि हेर्दा। साइटले स्क्रिनमा फ्रिह्यान्ड लेख्न र आकारहरू सहित संसाधनहरू प्रदान गर्दछ। सबै अनलाइन छ, तर तपाइँ सुरू गर्नु अघि, तपाइँ डाउनलोड गर्न आवश्यक छ रकेट लन्चर हल्का कुनै पीसी छैन।
नतीजा तपाईंको कम्प्युटरमा भिडियो वा GIF को रूपमा बचत गर्न सकिन्छ, क्लाउडमा बचत गरिएको छ, वा YouTube र Vimeo मा सजिलैसँग साझा गर्न सकिन्छ। रिजोलुसन कम, मध्यम वा उच्चको रूपमा सेट गर्न सकिन्छ।
Apowersoft नि: शुल्क अनलाइन स्क्रीन रेकर्डर (नि: शुल्क): वेब
SeoGranada सिफारिस गर्दछ:
तपाईंको फोन वाइफाइ वा USB केबलको माध्यमबाट पीसी वेबक्यामको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्
अनुप्रयोगहरू तपाइँको पीसी स्क्रीन नि: शुल्क रेकर्ड गर्न
उपयोगी जासूस अनुप्रयोगहरू
कसरी आईफोन मूल हो वा नक्कली र कसरी धोका नहुने भनेर जान्न
कसरी थाहा पाउने यदि मेरो पीसीमा खेल चलिरहेको छ
फोन र पीसी द्वारा फोटो वाटरमार्क कसरी गर्ने
Programs प्रोग्रामहरू पीसीमा गेमहरू सिर्जना गर्न पनि प्रोग्राम कसरी जाने भनेर जान्दैनन्
विन्डोज अनुप्रयोग बदल्नको लागि १० सर्वश्रेष्ठ फोटो दर्शकहरू
तथ्य वा नक्कली समाचार: कसरी खबर दिने गलत छ वा सत्य छ भनेर
२०२० मा इंस्टाग्राम कथाहरूमा फोटो र भिडियो पोष्ट कसरी गर्ने
कीबोर्ड कन्फिगर गरिएको छैन - कसरी समस्या निवारण गर्ने र समस्या समाधान गर्ने